Miyaan awoodi karaa in aan soo bandhigo liiska Amazon ee ku tiirsan waaya-aragnimadaydii hore ee Google?
Sida mashiinka kale ee raadinta, ma jirto tilmaame ugu dambeyn ah ama talaabo talaabo-tallaabo ah oo lagu hagaajinayo Amazon liiska ugu wanaagsan ee suurtagal ah si ay u qaadaan hogaaminta niche tartamayaasha hal mar iyo dhammaanba. Taas macnaheedu waa in qaybta libaaxa ee habka ugu fiican ee loo adeegsado ay tahay mid joogto ah oo isbeddelaya sanad kastana (iyo xataa bilo). Haddii aad halkan ku cusub tahay oo aad ka fakartid sida ugu wanaagsan ee aad ujirto liiskaaga ugu horeeya ee Amazon - ka dibna waxaad horay u joogtaa goobta saxda ah. Waxaan u maleynayaa inay noqon doonto wakhti fiican oo lagu sii wadi karo sameynta istaraatijiyad.
Dabcan, makiinadaha waaweyn ee raadinta sida Google ee laftoodu waa inay ahaadaan mudnaanta lambarkaaga. Laakiin marka laga eego aragtida e-ganacsiga iyo fikradda macaamilka ganacsiga macaamilka ee miisaanka, Amazon ayaa si aan caqli gal ahayn u ah lambarka ganacsiga ugu muhiimsan ee ganacsiga laba. Si kastaba ha ahaatee, si kastaba ha ahaatee, in si loo yareeyo Amazon liiska saxda ah, waxaad u baahan doontaa qaar ka mid ah fahamka aasaasiga ah si aad u dejiso ugu yaraan aad istaraatiijiga hore iyo dib-u-marinta waqtiga.
Sidan oo kale, waxaad yeelan kartaa meel fiican oo aad bilowdo oo aad dareentid inaad diyaar u noqotid - nasiib wanaag, Amazon raadinta algorithm maahan mid aad u casri ah sida kan Google u isticmaalo. Ka dib oo dhan, ma baddalayso sidii rabshad iyo marar badan oo isku xigxig ah oo heer sare ah ee algorithm ah ee raadinta aduunka ee raadinaya. Sidaas, waxaan hoosta ku socdaa inaan ku tuso liiska dhibcaha rasmiga ah si ay kaaga caawiyaan sidii aad ufududi laheyd liiska Amazon ee leh maskaxda maskaxda - ugu yaraan si looga fogaado dabiicadaha ugu caansan ee ku hareeraysan agagaarka. Ammaanka Aasaasiyadeed ee Horumarka Sameeynta ee Amazon
Ka hor inta aanad ku gelin arinta iyo ku siinayaa qaar ka mid ah talooyin wax ku ool ah si loo yareeyo Amazon liiska saxda ah, ii ogolow. mar kale walwal dheeraad ah - Amazon waa mid aad uga kala duwan makiinadaha kale ee raadinta sida Google laftiisa. Waxaan loola jeedaa in qaar ka mid ah talooyin iyo xirfado ay u muuqdaan kuwo isku mid ah. Si kastaba ha ahaatee, fahamka khilaafaadka asaasiga ah iyo hababka isku midka ah ee la midka ah - waa dhab ahaan waxa laga yaabo inay ugu dhib badan tahay halkaas.
Aan ka yeelno Farqiga u dhexeeya Amazon iyo Google Search Engine
CTR iyo qanacsanaanta - waayo-aragnimada user-friendly iyo is-beddelka ayaa ah qodobada koowaad ee caddaynta kala duwan Amazon iyo Google..Inkastoo shirkadda raadinta loo qorsheeyay inay iibiso xayeysiis, suuqa ugu weyn ee adduunka ayaa loogu talagalay inay iibiso alaabooyinka. Marka la eego cabbiraadda waxqabadka guuleysta, macnaheedu waa in Amazon ay ku tiirsan tahay qiimeynta dakhliga (haddii kale, marmarka guud ee raadinta), iyada oo laga duulayo Google si khaas ah loogu sharraxayo cabbirka webka, sida CTR ama celceliska wakhtiga ku baxsan bogga halkii booqasho user.
Diyaargarawga iyo Sadafka - waxaa loola jeedaa inkasta oo indexka Amazon ay si buuxda u qaabeysan yihiin qaabab gaar ah, waxaa jira sifo yar oo loo aqoonsan yahay Google taas oo si tartiib tartiib ah ugu socotay amar ku habboon tan iyo markii 2015.
On-Page iyo Off-Page - waxay soo jeedineysaa in aad ka faaiideysid liiskaaga Amazon ee kuugu dhow -sheegashada bogga. Tusaale ahaan, isku-xirka xiriirka bog-bogga waxaa ka muuqda saameyn ku dhawaad ​​eber oo ku saleysan liiskaaga dhabta ah, xaqiiqda maaha inaad jecesho sida Google u socoto.
Ka qaybqaadashada iyo asalka - halkan waxaan ku soo galeynaa isku xirnaan sax ah. Wax walbaa waa in Amazon aysan si fudud u daneeynin asalka dhabta ah iyo tan gaarka ah - sababtoo ah inta badan baabuurtaada mar walbaa laga soo jiido raadiye firfircooni hore u soo iibsanaya. Haddii aad leedahay qaar ka mid ah jilayaasha ama dhibcaha qaybood oo leh qaybo kale oo la mid ah - ha welwelin. Dhinaca kale, codsashada boodhka weyn ama sheyada qumman ee lagu hagaajinayo liiska liiska Amazon waa mid aan la aqbali karin - sida Google Source .